I-China Iingcingo zeBlits zeBloko kunye nabaXhasi-i-Chaolian Elektroniki
Ikhaya > Iimveliso > Inkqubo yeCopper > Iibhloko zeentambo
Iibhloko ze-Wiring ezenziwe e-China zingathengwa kwi-Chaolian Elektroniki ngamaxabiso asezantsi. Umvelisi oqeqeshiweyo kunye nomzi mveliso weemveliso ezikumgangatho ophezulu eChina.
Iibhloko zokubambisa ngababini ngababini ngemilenze ngokudibanisa iibhloko
Le yi-Wiring blocks 50 Pair enemilenze eneebhloko zonxibelelwano, inokwenziwa nge-50pairs / 100pairs / 200pairs / 300pairs, kwaye inokwenziwa ngemilenze kwaye ngaphandle kwemilenze. Sibonelela ngebhloko ye-wiring, ulawulo lwentambo, ikati.5e, ikati. 6 kunye nekati. iqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
Iibhloko zokubambisa ngababini ngababini ngemilenze ngaphandle kweebhloko zonxibelelwano
Le yi-Wiring blocks 50 Pair Ngemilenze ngaphandle kweebhloko zoqhagamshelo, inokwenziwa nge-50pairs / 100pairs / 200pairs / 300pairs, kwaye inokwenziwa ngemilenze kwaye ngaphandle kwemilenze. Sibonelela ngebhloko ye-wiring, ulawulo lwentambo, ikati.5e, ikati. 6 kunye nekati. iqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
Iibhloko zokufaka iingcingo ezingama-50 ngambini ngaphandle kwemilenze ngokudibanisa iibhloko
Ezi bhloko zebloko zingama-50 ngambini ngaphandle kwemilenze ngokudibanisa iibhloko zisetyenziswa ngokubanzi kwinkqubo yolungelelwaniso lwekhabhathi. Iyaziwa phakathi kwabathengi abathile.
Iibhloko zokufaka iingcingo ezingama-50 ngambini ngaphandle kwemilenze ngaphandle kweebhloko zoqhagamshelo
Ezi bhloko zebloko zingama-50 ngambini ngaphandle kwemilenze ngaphandle konxibelelwano Iibhloko zisetyenziswa kakhulu kwinkqubo yolungelelwaniso lwekhabhathi. Iyaziwa phakathi kwabathengi abathile.
I-Wiring Block 200 Pair ngaphandle kwemilenze
Le yiWiring Block 200 Pair ngaphandle kwemilenze, inokwenziwa nge-50pairs / 100pairs / 200pairs / 300pairs, kwaye inokwenziwa ngemilenze kwaye ngaphandle kwemilenze. Sibonelela ngebhloko ye-wiring, ulawulo lwentambo, ikati.5e, ikati. 6 kunye nekati. iqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
Ukuncamathela iibhloko ezingama-200 ngababini kunye nemilenze
Le Pair block 200 Pair enemilenze (eneebhloko zonxibelelwano) isetyenziswa ngokubanzi kwinkqubo yolungelelwaniso lwekhabhathi. Iyaziwa phakathi kwabathengi abathile.
I-Chaolian Electronic yenye yezobuchwephesha Iibhloko zeentambo abavelisi kunye nabathengisi e China. Umzi mveliso wethu ubonelela ngoluhlu lwamaxabiso. I Iibhloko zeentambo eveliswe ngumzi mveliso wethu yamkelwe kakuhle ngabathengi ngexabiso eliphantsi. Wamkelekile ukudibana.